Igumbi elahlukileyo elinezitshixo kwisakhiwo esisanda kulungiswa ngezitena zeclinker. Iindwendwe zikonwabela ukufikelela kwi-intanethi yasimahla kunye nekhitshi/ibhafu entsha, imigangatho yomthi oqinileyo, itafile yokutyela eyi-heirloom, kunye nendawo yokuhlamba impahla.
IMill Run East iqhutywa yiMill Run Lodging kunye neeOfisi ngenjongo yokunceda iindwendwe kwiYunivesithi yaseFranciscana eSteubenville, kunye nabasebenzi abaqeshwe kumdlalo werhasi/oyile wase-Utica Shale. Amagumbi ayafumaneka ngeveki okanye ngenyanga, kwaye anokuqeshwa nokuba ngabantu abangabodwa, apho iindwendwe zabelana ngebhafu ekufutshane nomntu ohleli kwelinye igumbi, njengamagumbi okuhlambela abucala, okanye njengeesuti (amagumbi okulala amabini kunye nebhafu) . Eli likhonkco logcino lomntu omnye.
Mill Run East ibekwe kwindawo ekhuselekileyo 1/2 ibhloko ukusuka kwimbali, usapho-friendly Belleview Blvd, promenade elibheke edolophini Steubenville kunye Ohio River. Imalunga nekhilomitha enye ukusuka kwiDyunivesithi yaseFrancisca, iipaki ezimbini zedolophu enkulu, kunye nendibano yezidlo ezithe zamiswa liziko leSixeko saseKroger.
Iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba zifowunele umninimzi kwiseli yakhe 24/7 ukuba kukho nantoni na abayifunayo.